Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) Employment (Amendment) Regulations, 2007 (No. 17) - SI 46/2007. Regulations on-line, Veritas Trust, Kubatana, the NGO Network Alliance Project, Zimbabwe (PDF) (Consultado el 2010-11-30)
Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) Employment (Amendment) Regulations, 2006 (No. 16 of 2006). Government Gazette, 2006-04-28Regulations on-line, Veritas Trust, Kubatana Net , Zimbabwe, 2 p. (PDF) (Consultado el 2007-03-09)
Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) Employment (Amendment) Regulations, 2001 (No. 11). Official Gazette, Statutory Instruments, 2001-10-19, No. 310, pp. 1983-1984
Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) Employment (Amendment) Regulations, 2000 (No. 9 of 2000). Supplement to the Government Gazette, 2000-03-24, 2 p.__
Repeals the first and second schedules to the Labour Relatins (Domestic Workers) Employment Regulations (No. 377 of 1992) and, thereby, raises domestic workers' wages by 35 per cent and minimum allowances by 70 per cent.Fecha de entrada en vigor: 2000-01-01
Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) Employment (Amendment) Regulations, 1994 (No. 3) Government Gazette, Supplement,, 1994-09-16, pp. 955-956
Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) (Employment) (Amendment) Regulations, 1993 (No. 2) (S.I. No. 373 of 1993) Government Gazette, Supplement, 1993-12-03, pp. 2045-2048
Zimbabwetrabajadores domesticos Labour Relations (Domestic Workers) Employment Regulations, 1992 (S.I. No. 377 of 1992) Zimbabwean Government Gazette, Supplement, 1992-10-30, pp. 2035-2051 (PDF of Regulations)